Uncategorized | ဒေါင်းဇာနည်
ဖက်ဆစ် အာဏာရှင်စနစ် ကမ္ဘာတွင် မရှိစေရ။
Hey there! Thanks for dropping by ဒေါင်းဇာနည်! Takealook around and grab the RSS feed to stay updated. See you around!
Revolution Analysis Framework by Khin Ma Ma Myo
Web: http://www.aappb.org, http://www.fbppn.net, http://www.nd-burma.org
“There can be no national reconciliation in Burma,
as long as there are political prisoners.”
There is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, more dangerous to manage, than the creation ofanew system.
Aung Myo Thein (AAPPB) က E-mail မှတဆင့် ပေးပို့ပါသည်။
၀၉၊ ၀၆၊ ၀၉ ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကို တုံ့ပြန်ချက်
(8888peoplepower@yahoogroups.com သို့ patriot.ever patriot.ever@gmail.com ၏ ပေးစာကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများ ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်ရန် ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
Comment ပေးတာ ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာ့အာဘော်နဲ့ မကိုက်လို့နဲ့ တူပါတယ်။ ထည့်မပေးလို့ 8888groups ကို ပို့ပေးလိုက်တာပါ။
NLD က ၉၀ တုန်းက တပြည်လုံးမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မဲနိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီ။ အစိုးရကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းရမယ့် ပါတီ ပါ။ ဒါပေမယ့် NLD အပါအ၀င် အနိုင်ရပါတီအားလုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး စစ်သားနိုင်ငံရေး မလုပ် တတ်ဘူးဆိုပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာ၊ အာဏာပြဿနာကို ကလေးကလား သွားလုပ်မိလိုက်ကြတော့ ဗိုလ်ချုပ် စောမောင်ဆီမှာ ဗြောင်အလိမ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ လွှတ်တော်ခေါ် အစိုးရဖွဲ့ပေးရမလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံမှ မရှိတာ။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာ ငါတို့နဲ့ ပေါင်း ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့ အားလုံးဂယောင်ချောက်ချား ဖြစ်သွားကြတယ်။ ရူးရူးမူးမူးနဲ့ reconcilia- tion လား။ annihilation လားဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသြဇာ၊ စည်းရုံးရေးအင်အားနဲ့ အခြေခိုင်မှုကို ထည့်မ တွက်ဘဲ စစ်အုပ်စုနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးရော၊ စစ်ရေး (နယ်စပ်ဒေသ) မှာပါ တဖြည်း ဖြည်း အရေးနိမ့်ခဲ့ရတော့ နောက်ဆုံး အဝေးရောက်အစိုးရလည်း Washington DC ထိ ရောက်သွားတယ်။ ရန်သူနဲ့ မစေ့စပ်တမ်း တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကောက်ရိုးမီး သူရဲကောင်းတွေလည်း နောက်ဆုံး တဖက်သတ် အညံ့ခံ ရေးလမ်းကြောင်းကိုပဲ ဦးတည်သွားကြတယ်။
အတိုက်အခံတွေအနေနဲ့ ရန်သူ့အခြေအနေ၊ မိမိအခြေအနေ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုက်ပါနိုင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ အနေ အထားကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး အားလုံးလိုက်ပါနိုင်မယ့် ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်တခု မဆွဲနိုင်ခဲ့ကြတာ ဗမာတပြည်လုံးအ တွက်ရင်နာစရာပါ။ လက်ဝဲကျွံပြီး မိုက်ရူးရဲဆန်ခဲ့ကြလို့ အခုလက်ယာကျွံပြီး အညံ့ခံထွက်ပြေးရေးလမ်းပေါ် ရောက်သွားကြတယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီအနည်မထိုင်ခဲ့သလို ပါတီစုံစနစ်လည်း အသားမကျခဲ့ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတွေမှာလည်း ဦးစီးဦးဆောင် ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ရေရှည်ခေါင်းဆောင်မှု မခိုင် မြဲခဲ့လို့ နိုင်ငံရေးအရ အောင်မြေမချဲ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေက ဒီမိုကရေစီဘက်တော် သားတွေကို မဲပုံပေးခဲ့တာဟာ သူတို့ရဲ့ လိုဘဆန္ဒကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အ ကောင်အထည်ဖော်ပေးကြဖို့က ဦးဆောင်ပါတီ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ပါ။ အင်တာဗျူးတခုမှာ NLD အခု ဘာလုပ်နေသလဲမေးတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က လူထုတွေ ဘာလုပ်နေသ လဲ ပြန်မေးချင်တယ်ဆိုပြီး ပြန်ပက်လိုက်တော့ ပြည်သူတွေအတွက် တော်တော်စိတ်ထိခိုက်စရာ ကောင်းပါ တယ်။
ဗမာပြည်သူလူထုမှာ လူထုတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ အာဏာဆိုတာ သေနတ်ပြောင်းဝက လာတယ် (ယုတ်စွအဆုံး လတ်တလော အခြေအနေမှာ) ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြ ပါတယ်။ ဦးတည်ချက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲ၊ တောင်းဆိုချက် မပီပြင်ဘဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်မာဘဲ နိုင်ငံရေးသမား တွေ တပွဲတိုး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ ရှေ့တန်းကနေ အသက်ပေးလိုက်ရတာ၊ ဘ ၀ပေးလိုက်ရတာ ပြည်သူတွေပါ။ ဗမာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါ ၀င်ဖို့ ၀န်မလေးကြသလို တဘက်ကလည်း တိုက်ပွဲခေါ်နေတဲ့လူတွေ ဟန်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယရှိနေတတ် တာကို တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေ အထူးသဘောပေါက်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အရှိန်မြင့်နေချိန်မှာ NLD က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေက ဒါကတော့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံမယ့် လမ်းကြောင်းပဲ။ NLD မှာ ပေါ်လစီမရှိဘူး။ မပါဝင်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာကို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ NLD ဘယ်လဲ ဘာလဲလို့မေးရင် ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယုံကြည်မှုများစွာနဲ့ မဲပေးခဲ့တဲ့ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမတ်လောင်းတွေဆီမှာ ပြည်သူတွေ သစ္စာဖောက်ခံရတယ်လို့ပဲ ခံစားမိပါတယ်။
ပါတီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာ လူထုကို အတွေးအခေါ်အရ၊ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်အရ လူထုကို စနစ်တကျနဲ့ စံပြခေါင်း ဆောင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ပါတီရပ်တည်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်တွေ အငြိုငြင်ခံလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ သဘော ထားကြတဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေဖန်ရေးလုပ်နိုင်ကြမယ်ဆို ရင် ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ အရည်အသွေးအရ တဆင့်ခုန်တက် သွားလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ့်လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တိုက်ပွဲထဲကပဲ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်တာ ခံနိုင် ရပါမယ်။ တိုက်ပွဲတွင်းမှာ ချေမှုန်းခံရရင် တိုက်ရင်း တည်ဆောက်၊ တည်ဆောက်ရင်း တိုက်ဖို့ကလွဲလို့ အခြား မရှိပါ။ ပါတီအကျိုးအတွက် ပါတီထောင်တားတာ party for party’s sake ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်တခါက ပြော ခဲ့ဖူးသလို့ တိုင်းပြည်ကတော့ ငါးပါးမှောက်ဖို့ သေချာပြီ the country is doomed လို့ ပြောရမှာပါပဲ။
လူထုနစ်နာမှာ ကြောက်လို့ လူထုတိုက်ပွဲ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို အရှိန်မမြှင့်တာလို့ ဆင်ခြေပေးမယ်ဆိုရင် တော့ အခြေအနေကို မသုံးသပ်ဘဲ လူထုကို တဖက်သတ် အထင်သေးတာလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ စစ်အုပ်စုရဲ့ ပရိ ယာယ်ကို နားမလည်လို့၊ လျှော့တွက်ခဲ့ကြလို့၊ လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ မတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့လို့၊ တိုက်ပွဲအရှိန်ကို ဆက်မထိန်း နိုင်ခဲ့လို့၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လွှတ်တော်မခေါ်နိုင်ခဲ့လို့၊ ရရင်ရ မရရင်ချ သဘောမထားနိုင်ခဲ့လို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ အဆင့်က စစ်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲရမယ့် အဆင့်၊ ဒီကတဆင့်လျှောပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ခွင့်ပေး ပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အချက်တွေ ပြင်ပေးပါဆိုတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ခဲ့ရတာပါ။
အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ အဆင့်က နှစ် (၂၀) နီးပါးကြာခဲ့ပြီးမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါ။ နားလည်မှုနဲ့ လုပ် ကြရအောင်ဆိုတာ တော်လှန်ရေးအဆင့်တက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်လျှောသွားတာ၊ ပြည်သူတွေပိုပြီး နစ်နာလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်ဒေသမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ။ ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာပါ ထမင်းတနပ်အတွက် အသွေး၊ အသားရောင်းစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ် နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ။ နိုင်ငံတကာမှာ ဂုတ်သွေးစုပ်ခံနေရတဲ့ ဗမာအလုပ်သမားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ။ လူထုတိုက်ပွဲထဲမှာ သေတဲ့၊ ထောင်ကျတဲ့ အညတရပြည်သူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ။ ပြည်တွင်းစစ်မှာ သေတဲ့ အောက်ခြေက စစ်သားရော၊ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ။
နာမည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်တပ်ကလည်း အလွယ်တကူ မထိရဲသလို၊ နိုင်ငံတကာကလည်း လျစ်လျူမရှုပါဘူး။ ထောင်ထဲရောက်တာနဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပြန်ပြီ၊ သွေးတိုးထပြန်ပြီဆိုတာ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကို ငွေကြေးပုံအောပြီး တည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့ အထက်တန်းစား နိုင်ငံရေးသမားတွေပဲ တင်ပြ နိုင်ကြတာပါ။ ရဲဘက်စခန်းမှာ၊ ပေါ်တာဆွဲရာမှာ သေသွားတဲ့ အညတရ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ပြည်သူ တွေကိုလည်း သနားကြပါဦး။
မင်းတို့က ပြည်တွင်းမှာမဟုတ်လို့ ပြောနိုင်တာဆိုတဲ့ အနုမာနလေးတွေနဲ့ တုံ့ပြန်ဖို့လည်း စိတ်မစောကြပါနဲ့ဦး။ ဘယ်တော်လှန်ရေးမဆို ပြည်တွင်းမှာပဲ အောင်ပွဲခံကြတာချည်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေး တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျားမြီးဆွဲတဲ့ ကိစ္စ၊ မီးခဲကိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုင်ရဲရင် ရဲရဲကိုင်၊ မကိုင်ရဲရင် ကိုင်ကိုမကိုင်နဲ့။ တတ်နိုင်သလောက် ပြော၊ ပြောသလောက် လုပ်ကြပါ။ မြေပေါ် မတက်ရဲရင်၊ တက်ဖို့ အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံရင်၊ အခြေအနေမ ပေးရင် မြေအောက်မှာနေပြီး လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ပါ။ ဟီးရိုးလုပ်ပြီး မဏ္ဍပ်တိုင်လည်း တက်ပြ၊ ပြန်အဆော် ခံရတော့ မနှဲလေးအသံနဲ့ နိုင်ငံတကာကို တိုင်တည်ပြ လုပ်နေရုံနဲ့တော့ ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးက ပြည်သူ တွေအဖို့ မျှော်တော်ဇောနဲ့ မောကြရုံပါပဲ။
ပြည်ပမှာရှိတဲ့ အများစု နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း မာနယ်ပလောမှာ ဒီမိုကရေစီမရရင်၊ ချင်းမိုင်၊ မဲဆောက် မှာ ဒီမိုကရေစီရ၊ ၀ါရှင်တန်မှာ ဒီမိုကရေစီရနေတဲ့ လူတွေပါ။ နအဖ ဖိနှိပ်တာကို အကြောင်းပြလို့ ဆွေခုနစ် ဆက်၊ မျိုးခုနစ်ဆက်လည်း နိုင်ငံတကာကို ရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ တချို့ဆို နိုင်ငံတကာမှာ ပညာရော၊ အရင်းအ နှီးပါ စုမိလို့ နအဖနဲ့ ပလဲပနံသင့်အောင်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းဝင်လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့တောင် တာစူနေကြပါပြီ။
တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့သီတာ၊ ဧယင်ကျူးတာ မဟုတ်ပါကြောင်း … …။
Than Shwe’s Real Age
Village fired by DKBA (February 16, 2009)
ဧရာဝတီ Site ကအာဘော်ကို ပြန်တင်ထားတာပါ
မေး။ ။ တကယ်လို့ ဒီနှစ် မေလမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည်သူတွေ အလွန်ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်အစိုးရကိုလည်း လူတွေက ကျေးဇူးတင် သာဓုခေါ် ကြပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကတောင် အသိအမှတ်ပြုတုံ့ပြန်တာမျိုး ရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အမေရိ ကန်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာမိသားစုဆီကပါပဲ။
မေလမှာ ဒေါ်စု ပြန်လွတ်လာဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လွတ်လာရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးက သူ့ကို “လမ်းပြမြေပုံ” လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်စေချင်လို့ သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်စေချင်လို့ ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သူက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်းမှ လွတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ စစ်အစိုးရက ဒီကိစ္စကို နောက် အစိုးရလက်ထဲ လွှဲပေးချင်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ စစ်အစိုးရ ဘာကြောင့် ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကို ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်စေချင်ရမှာ လဲ။ စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ အခုပွဲက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပါ။ သူ့အလိုကျ မဲလိမ်ညစ်ပတ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်တာက သူပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူက ဆက်လက် တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
သူ့ကို ပြန်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်မှ ကျနော်တို့ ထပ်တွေ့ကြရမယ့် လက်တွေ့ပြဿနာက ဒေါ်စု ပြန်ပြီးတော့လည်း အဖမ်းခံရနိုင်ပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် ၆ နှစ်ကြာ အိမ်အကျယ်ချုပ် ပြန်ချထားတာမျိုးလည်း ကြုံနိုင်ပါသေးတယ်။
ပိုဆိုးတဲ့ အနေအထား မျှော်လင့်ထားနိုင်တာက ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ကြုံရနိုင် တာပါပဲ။ အခု သူအဖမ်းမခံရခင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ စစ်အစိုးရ လိုလားတဲ့ လူအုပ်စုတွေက သူ့ကားတန်း ကို ဒီပဲယင်းမှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ လေ့လာသူတွေနဲ့ သံအမတ်တွေ ထင်ကြတာက ပြန်လွတ်လာရင်တောင် ရန်ကုန်မြို့ထဲ လောက်ပဲ သွားလာခွင့် ကန့်သတ်ထားတာမျိုးလည်း ကြုံရနိုင်ပါသေးတယ်။
မေး။ ။ တချို့မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူတွေ ပြောကြတာက သူ့ကို NLD ပါတီကနေ ခဏနားသင့်တယ်လို့ ဆိုကြပါ တယ်။ အဲသည်အစား သူက နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် စစ်အစိုးရနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အင်အား ပိုသုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုနေပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကုလသမဂ္ဂအထူးသံ မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂန်ဘာရီကတဆင့် ဒေါ်စုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇၊ နိုဝင်ဘာလ ကြေညာ ချက်ကို ကြည့်ရင်၊ ဒီမေးခွန်းအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေပေးထားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူပြောတာက ဒီမို ကရေစီ နိုင်ငံ (လူမှုအဖွဲ့အစည်း) တွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ သူ့ပါတီက လူတွေရဲ့ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုတွေကိုလည်း လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ သူက ဒီပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးတဦး လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီပါတီဝင်တွေရဲ့ ဆန္ဒလိုလားမှုတွေ၊ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒတွေက သူ့ကို ဦးဆောင် လမ်းညွှန်နေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အခုအချိန်က ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သွေးစည်းကြရတော့မယ့် အချိန်၊ သူ့တာဝန်ကလည်း မတူကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ အုပ်စုတွေ အသီးသီးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေ၊ ထင်မြင်ချက်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ လေးလေး နက်နက် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရတော့မယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ ကိစ္စကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချိန် လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်စုအနေနဲ့ သူ့ပါတီကနေ ခဏနားသင့်သလားဆိုတဲ့ အကြံပေးချက်တွေကတော့ တနိုင်ငံလုံးက လုံးဝဆန့်ကျင်ကြမှာပါ ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဖော်ပြခဲ့တာကတော့ အကယ်၍ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ် ထွန်းတိုးတက်စေရေးအတွက် လေးနက်စဉ်းစားဖွယ်ရှိတဲ့၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေရှိ လာရင်တော့ လေး လေးနက်နက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စုမရှိရင် NLD ပါတီဆိုတာ အသက်မဲ့သွားမှာပါပဲ။ သူ့ ဘက်ကရော၊ ပါတီဘက်ကပါ အပြန်အလှန် လိုအပ်နေကြပါတယ်။
မေး။ ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်စုရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ အကယ်၍ NLD ပါတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စဉ်းစားချက်ကို ထင်ဟပ်နေမယ်လို့ ယူဆရင်တော့ (ဒါပေမယ့် သူဘယ်လို စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး) သူက စစ်အစိုးရရေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို သဘောတူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း NLD ပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါကပါတီရဲ့ ပျော့ပြောင်းညင်သာမှုကို ပြတာပါ။
မေး။ ။ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုသဘောထားနိုင်မလဲ။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရေးမူတွေကို သူ့အနေနဲ့ အနည်းအကျဉ်း သြဇာသက်ရောက်နိုင်မယ် ထင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေကတော့ ဖေဖေါ်ဝါရီလက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ အထူးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ဖတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ NLD က ပြောတာက ဒေါ်စုက ကြားခံဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ ဦးအောင်ကြည်ကတဆင့် အချိန်မရွေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေကို ပြောထားတယ် ဆိုပါတယ်။ “ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး။ အလုံးစုံပျက်သုဉ်း ရေး၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပိတ်ပင်မှု” တွေ ရှောင်လွှဲနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ ပြောထားပြီးသားပါ။ စစ် အစိုးရက ဒီအချက်တွေကို ဒေါ်စုကလုပ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲထားပါတယ်။
“သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်းကိစ္စရပ်များကို အဆုံးအဖြတ်ပေး နိုင်ကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးတို့သည် လက်တွေ့ကျကျ မလွှဲမသွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က စိတ်စေတနာကောင်းမွန်စွာဖြင့် တိုက်တွန်းကြောင်း ထပ်မံ၍ အလေးအနက် ကြေညာလိုက်ပါသည်” လို့ ပါတီ ကြေညာချက်က ဆိုထားပါတယ်။
ဒေါ်စုနဲ့ အစိုးရရဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကလည်း သူတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပူးတွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ အကြံပေးတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သူတွေပြောတာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သဘောတူချင်မှ တူပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ဘက်စလုံးမှာ သံသယနဲ့ မယုံကြည်တာတွေ အကြီးအကျယ် ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့က ယုံကြည်မှု တည် ဆောက်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ မနှေးအမြန် ပြန်လည်စတင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့ကတော့ အကြံမပြုလိုပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ သူ့တို့ရဲ့ ဘာမှ မသိ နားမလည်တဲ့ အထူးသံကြီးက ခဏနေ ဒီလှည့်ကွက်ထဲ ခုန်ဆင်းပြီးတော့ “ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး” စီမံချက်လုပ်ပြီး လှည့်ရောင်းစားနေပါဦးမယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်စု မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်သွားသင့်သလား။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုဆိုရင် စစ်အစိုးရက သိပ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါ်စုကို လေယာဉ်လက်မှတ်တောင် ၀ယ်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် တလမ်းသွား၊ ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ လက်မှတ်မျိုးပေါ့။
သူက နိုင်ငံတကာမှာတော့ အတော်ရေပန်းစား နာမည်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားမားလို မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သူနာမည်ကြီးတာက ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံမှာလဲ။ စစ်အစိုးရကို အကောင်းပြောနေတဲ့သူတွေ၊ ထောက်ခံတဲ့သူတွေ၊ စစ်အစိုးရဘက်လိုက်ကြမယ့် အစိုးရတွေက ဒေါ်စုကို သေးသိမ်အောင် လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ သူလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေ မအောင် မြင်နိုင်အောင်လည်း ခြေထိုးဖျက်ဆီးကြပါလိမ့်မယ်။ အာရှတိုက်ကိုတောင် ပြန်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေ အနေဖြစ်သွားနိုင်ပါ တယ်။ ဂျပန်ကိုတောင် လာဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ သူသြဇာအရှိန်အ၀ါကြီး မှာ သေချာပါတယ်။
စစ်အစိုးရကို အကောင်းပြောနေသူတွေ၊ မူဝါဒချမှတ်သူတွေနဲ့ စစ်အစိုးရကို လိုလားတဲ့ တချို့ပညာရှင်တွေက ဒေါ်စုကိုယ်နှိုက်က ပြဿနာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်နေပြီလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဒီလိုဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေက အချိန်တခုမှာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲသည်တော့ ချုပ်ပြောရရင် ဒေါ်စုက မြန်မာပြည်မှာပဲနေပြီး ပြည်တွင်းထဲကပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာလူထုတွေအနေနဲ့ ဒေါ်စုကို ဒီအတိုင်း ဆက်လက်ထောက်ခံနေကြမှာလား။
ဖြေ။ ။ သူ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲလ် ဆုရှင်က မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နေ မှာပါ။ သူ့ကို ဆက်ပြီးလေးစားနေကြပါလိမ့်မယ်။ အတိုက်အခံတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားနေကြသူတွေက သူပြန်လွတ်လာ ရင် တဖန်ပြန်ပြီး အားတက်လာကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို စစ်အစိုးရက ကြောက် နေရတာပါ။ အကျယ် ချုပ်ဆက်ပြီး ချုပ်နှောင်ထားတာပါ။
မေး။ ။ ဒေါ်စုလွတ်လာရင် သူ ဘာတွေပြောမှာလဲ။
ဖြေ။ ။ တချို့လေ့လာသူတွေ ပြောနေတာက သူရော၊ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေမှာပါ မူဝါဒတွေမှာ လက်တွေ့ကျကျ ကြည့်သင့်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့ပြောတာက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာတွေ တောင်းဆိုနေတာထက် စာရင်၊ စီးပွားရေးအကြောင်း ပြောသင့်တယ်၊ နိုင်ငံရဲ့ လူမှုကပ်ဘေး ဒုက္ခအကြပ်အတည်းတွေအကြောင်း ပြောသင့်တယ်၊ ဆင်းရဲ မွဲတေမှုအကြောင်း ပြောသင့်တယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒေါ်စုအခု စီးပွားရေးဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုကို ဘယ်လို စဉ်းစား နေတယ်ဆိုတာတွေလည်း ပြောသင့်တယ်လို့ သူတို့က အကြံပြုကြပါတယ်။
သူက အခုတခါ စာမျက်နှာသစ်ကို တကယ်ပြောင်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ပြဖို့ လိုပါတယ်။ သူက အပေးအယူလုပ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အရင်လိုပဲ မပြောင်းလဲကြောင်း ဆက်လက်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ သူက တကယ်လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းတဦးဆိုတာ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။
သူက NLD ပါတီနဲ့ တနိုင်ငံလုံးက ထောက်ခံသူတွေကို ပြန်လို့ သက်ဝင်တက်ကြွလာစေနိုင်ပါတယ်။ သူက ပထမဦးဆုံး ပါတီက “အန်ကယ်ကြီး” တွေနဲ့၊ ပါတီဝါရင့်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူငယ်တွေနဲ့ အရင်မျက်နှာစုံညီ ထိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပါတီကို ဘယ်လိုပြုပြင် ပြောင်းလဲကြမလဲ၊ ဘယ်လိုအားသစ်လောင်းကြမလဲ၊ NLD ပါတီကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင် ဘယ်လိုလုပ် ကြမလဲ ဆွေးနွေးကြရပါလိမ့်မယ်။
သူက စစ်တပ်က အရာရှိ၊ အရာခံ၊ ရဲဘော်တွေကို စကားပြောတဲ့အခါ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့အရာရှိတွေက စစ် အစိုးရကို စိတ်ကုန်နေကြပါပြီ။ အပြောင်းအလဲကို မြင်ချင်နေကြပါတယ်။ သူတို့က ဒေါ်စုအပေါ်မှာ အပြောင်းအလဲအတွက် မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ထဲမှာ သူ့ကို နာမည်ဖျက် အပုပ်ချနေတာတွေ ရှိနေနိုင်တာကိုလည်း သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်အရာရှိ အများစုက သူ့ကို အဆိုးမြင်ကောင်း မြင်နေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို နည်းပရိယာယ်အရ ထောက်ခံမှုရလာအောင် ပြန်ကြိုးစား ဖို့ လိုနေပါတယ်။
မေး။ ။ NLD ပါတီက မစ္စတာဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာခင်လာလည်မယ့် ကိစ္စကို ကြိုဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရက ဒီအစီအစဉ်အပေါ် နှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ကုလသမဂ္ဂကို သိပ်နေရာမပေးချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မကြာခင်ပြန်လွှတ်ဖို့ စဉ်းစားကောင်း စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကုလအကြီးအကဲကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ လာခွင့်ပြု လိုက်ရင် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင်က သူ့အိမ်စာ သူလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါ သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်တခုခု ကိုင်ပြီး ထွက်သွားတာမျိုး ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူကိုယ်တိုင်နဲ့ သူ့ခရီးစဉ်လည်း သိက္ခာကျစရာ၊ လူရယ်စရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ မြန်မာပြည် ပြင်ပက ဘယ်သူတွေကို အားကိုးနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ သူ့အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်တွေ့ကျတဲ့ မူဝါဒတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ ပြင် ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့က စစ်အစိုးရကို အဓိကပံ့ပိုးရပ်တည်ပေးနေသူတွေပါ။ ၀ါရှင်တန် (အမေရိကန်အစိုးရ) က တော့ အမြဲတမ်း သူ့နောက်က ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယကို သူ့နောက်မှာ အပါခေါ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ စစ်အစိုးရကို စိတ်ပျက်နေတယ် ဆိုတာကို သူက လျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်အားကြီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို ဖီလာဆန့်ကျင် မတိုက်သင့် ပါဘူး။ သူတို့က လက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်သလို စီးပွားရေးအရ အကျိုးစီးပွားဖြစ်မှုအပေါ် မူတည်နေကြတာပါ။ အာဆီယံ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရ ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်စုက ပြောတဲ့စကားဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေ ကို ပြောတဲ့စကားထက်စာရင်၊ သူတို့ကို ထိရောက်အောင် ပြောတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
သိထားသင့်တာက အာဆီယံခေါင်းဆောင်တချို့က စစ်အစိုးရကို မကြိုက်နှစ်သက်ကြသလို ဒေါ်စုကိုလည်း တခြား ရွေး ချယ်စရာ ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ မြင်လိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်စုက ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြဖို့ လိုပါတယ်။ သူက ဒီလို အသိအမှတ်ပြုထိုက်တဲ့ အင်အားတခုဆိုတာ ပေါ်လွင်လာအောင်လည်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
အောင်ဇော်၏ Will Suu Kyi Be Soon Free? And What Then? ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
(ဧရာဝတီ)တပ်မတော်အရင်းရှင်စနစ် မြန်မာပြည်တွင် ကြီးထွားနေ
မြန်မာ့ တပ်မတော်သည် ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာပြည် စီးပွားရေး အထူးသဖြင့် အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများကို လက်ဝါးကြီးအုပ် လာသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးတွင် ဦးဆောင်မှု ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လိုသည့် တပ်မတော်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ မောင်အောင်မျိုးက သုံးသပ်ထားသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ၂ ရပ် ရှိသည်ဟု မောင်အောင်မျိုးက တပ်မတော်ကို တည်ဆောက်ခြင်း (Building the Tatmadaw) အမည်ရှိ စာအုပ်တွင် မှတ်ချက်ချ ရေးသားထားသည်။ ထိုအကြောင်းရင်း ၂ ရပ်မှာ မည်သူ့ကိုမျှ မှီခိုရခြင်း မရှိစေရန်၊ ခေတ်မီတပ်မတော် တည်ဆောက်ရေး အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့နိုင်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ တပ်မတော်က စီးပွားရေး အဖွဲ့ကြီး ၂ ခုကို တည်ထောင်ထားသည်။ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉ဝ တို့တွင် စတင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း နှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက် တို့ ဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက် တခုမှာ ဦးပိုင် ဟု ထင်ရှားသည့် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်သည် တပ်မတော်သားများ၊ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့များ ထံမှ ငွေကြေးများဖြင့် မ တည် ရင်းနှီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်ကို ယခင်က ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးညွန့်က ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကာကွယ်ရေး စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုရုံးမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေး က တာဝန်ယူထားသည်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်သည် အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် တပ်မတော်က ပထမဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေး အင်အားစု ဖြစ်သည်။
ဦးပိုင် လီမိတက်သည် စင်္ကာပူ၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့နှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ စားအုန်းဆီ၊ လောင်စာဆီ၊ မော်တော်ယာဉ်များကို ထိုနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းသည်။ စီးကရက်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကျောက်မျက်၊ အဝတ်အထည်များကို ထိုနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သည်။
၁၉၉ဝ နှင့် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်အတွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ၇၇ ခုကို ဦးပိုင် လီမိတက်က တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မောင်အောင်မျိုး၏ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါစာအုပ်ကို စင်္ကာပူ အခြေစိုက် အဖွဲ့တခုဖြစ်သော အရှေ့တောင် အာရှ လေ့လာရေး ဌာနက ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးပိုင် လီမိတက်သည် ကျောက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုပ်ရေး၊ အထည်ချုပ်၊ သစ် နှင့် သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်ရေး၊ စားသောက်ကုန်၊ ဘဏ်၊ ကုန်တိုက်၊ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စာရေးကိရိယာ စသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဦးပိုင် လီမိတက်က လုပ်ငန်း ၃၅ ခုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းမှုမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ၆ ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် တခုမှာ မိုးကုတ်၊ မိုင်းရှူး၊ နမ်းယာ၊ မော်ချီး၊ သပိတ်ကျင်းဒေသများတွင် လုပ်ကိုင်သော မြန်မာ့ပတ္တမြားလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတခုမှာ အနောက်နိုင်ငံများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ပိတ်ဆို့ ဆန့်ကျင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်ဟု မောင်အောင်မျိုးက ယူဆသည်။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေများမှာ မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒများ အားနည်းခြင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများဖြစ်သည်။
ကိုရီးယားမှ Segye ကော်ပိုရေးရှင်း၊ Daewoo ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ကိုရီးယားအခြေစိုက် Pohon သံ နှင့် သံမဏိ ကုမ္ပဏီ၊ စင်္ကာပူမှ Rothmans Myanmar Holding Pte Ltd နှင့် Fraser & Neave အုပ်စု၊ ဂျပန်မှ Mitsugi ကော်ပိုရေးရှင်း၊ Nikko Shoji ကုမ္ပဏီ လီမိတက်တို့သည် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက် နှင့် အကြီးအကျယ် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏လက်အောက်တွင် ရှိသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကိုယ်ပိုင် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအနှံ့တွင် အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၁ ခုကို လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု မောင်အောင်မျိုးက ဆိုသည်။
ထိုလုပ်ငန်းများအနက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ကိုင်နေသည့် သံလွင်မြစ်ပေါ်မှ တာဆန်း ရေအား လျှပ်စစ် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းလည်း ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲကြပ်တည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များမှာ သဘာဝသယံဇာတများကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး စစ်ယန္တရားကို တည်ဆောက်နေစဉ်မှာပင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဓနအင်အားသည်လည်း တိုးတက် ကြီးထွားလျက်ရှိသည်။
ဒေါ်စုအကြောင်း တရုတ်ရုပ်သံက ထုတ်လွှင့်
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အကြောင်း ရှားရှားပါးပါး ထုတ်လွှင့်သွားသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲတဖွဲ့ဖြစ်သော ဂျနီဗာ အခြေစိုက် တရားမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အဖွဲ့(WGAD) ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အကျယ်ချုပ်ချထားခြင်းသည် မြန်မာပြည်တွင်း ဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း မကြာသေးခင်က ကြေညာချက်အပေါ်အခြေခံ၍ အဆိုပါ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်က သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ဒေသခံများက ပြောသည်။
ထိုသတင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်ပုံများနှင့် တကွ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူများက တရုတ် သတင်းဌာနတခု၏ ယခုလုပ်ရပ်သည် မြန်မာအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တဦးကို တရုတ်အာဏာပိုင်များအနေနှင့် အသိအမှတ်ပြုသည့် လက္ခဏာတရပ်ကိုပြဆိုကြောင်း ပြောသည်။
အဆိုပါရက်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှရေးရာညွှန်ကြား ရေးမှူး မစ္စတာ စတီဖင် ဘလိတ် ရောက်ရှိနေပြီး စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ တရုတ်အစိုးရဘက်မှ အမေရိကန်နှင့်မြန်မာအစိုးရ ဆက်ဆံရေးပိုမို ကောင်းမွန်လာမည်ကို စိုးရိမ်မှုရှိခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရုပ်သံအစီအစဉ်မှ ပြသခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လေ့လာသူများက ပြောဆိုကြသည်။
မစ္စတာ စတီဖင် ဘလိတ်သည် ၎င်း၏ ၄ ရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင် သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ) ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်လုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေး ဥပဒေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အရဆိုလျင်နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာတည်မြဲရေး နှင့် လုံခြုံရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်သူများ၊ ပြည်သူလူထု၏ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို နှောင့်ယှက်သူများကို ၅ နှစ် အထိ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှ စတင်၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည်မှာ ၅ နှစ် ကျော်ပြီ ဖြစ်ပြီး လာမည့် မေလ ၂၄ ရက် ဆိုလျင် ၆ နှစ်ပြည့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်း ၁၃ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ညိုစိုင်း တက္ကသိုလ်နေဝင်း တင်မိုး တာရာမင်းဝေ ထုတ်ပြန်ချက် ဒဂုန်တာရာ ပါရဂူ ဗန်းမော်တင်အောင် မင်းသုဝဏ် လူထုဦးလှ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း သခင်ဘမောင် သတင်း အောင်ဝေး